Cumar Carte Qaalib oo Hargeysa ku geeriyooday + Taariikh-nololeedkii Marxuumka - SomalilandPost
Home News Cumar Carte Qaalib oo Hargeysa ku geeriyooday + Taariikh-nololeedkii Marxuumka
Cumar Carte Qaalib oo Hargeysa ku geeriyooday + Taariikh-nololeedkii Marxuumka
Hargeysa (SLpost)- Allah ha u naxariistee, waxa cusbitaal ku yaalla magaalada Hargeysa maanta ku geeriyooday Siyaasi Cumar Carte Qaalib oo ka mid ahaa siyaasiyi magac iyo Saamayn ku dhex leh Bulshada Soomaalida iyo Caalamkaba.
Marxuumka ayaa muddooyinkii u dambeeyey xaalad xannuun u jiifay cusbitaal Hargeysa ku yaalla, isagoo da’diisu tahay 90-jir.
Madaxda Soomaalida oo uu ugu horreeyo Madaxweynaha Somaliland, ayaa tacsi u diray ehelkii, qaraabadii iyo bulshada Soomaaliyeed ee uu ka baxay marxuum Cumar Carte Qaalib.
Taariikh nololeedkii Marxuumka.
Marxuum Cumar Carte qaalib oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa, ayaa ka mid ahaa siyaasiyiintii ugu magaca dheeraa ee soo maray Soomaalida.
Saameynta uu siyaasadda ku lahaa waxay kasoo billaabatay xilligii uu gumeystaha heystay Somaliland, wuxuuna kaalmo muhiim ah kasoo ciyaaray dowladihii jiray ilaa burburkii Soomaaliya kaddib.
Markii ay Somaliland xorriyadda ka qaadaneysay gumeystayaasha wuxuu ku jiray siyaasiyiintii ugu firfircoonaa waddanka.
Cumar Carte Qaalib xilligii uu ahaa Safiirka Ethiopia
Raysalwaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Carte
Magaalada Hargeysa ayaa Khamiista lagu aasi doonaa Cumar Carte, sida uu sheegay afhayeenka madaxweynaha Somaliland, Maxamuud Warsame Jaamac.